Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: mpino sady mpiangona nefa tsy mivavaka | NewsMada
Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: mpino sady mpiangona nefa tsy mivavaka
Manana fomba ankolaka ilazana tsy fetezan-javatra ny fiteny malagasy. Tsy mivantambantana fahatany nefa mahery setra ary tena masiaka izany fanambarana olona ho tsy mivavaka izany, izay ampy ilazana ny fahasahiany manao ratsy sy ny tsy fahatahorany an’Andriamanitra. Ny fanebahana amin’ny fanendrikendrehana olona ho tsy mivavaka tsy mitory na ny tsy fisehoany ho mpino na ny tsy fandehanany any am-piangonana. Maro amin’ireo mpivavaka manaja izany fisehoana izany no voalaza ho tsy mivavaka. Dia loza indroa miantaona ve ho an’ireo sady tsy mampiseho fananana finoana ka tsy mamonjy fandaharana any amin’ny tranon’Andriamanitra no mbola mampiseho toetran’olona tsy mivavaka? Indroa voaheloky ny mpitsara ivelany. Mba tsy indroa voatefaka toy izany, aleo ihany mihatsaravelatsihy hoy Balita sy ny hafetsifetseny.
Ny sehatra fanaovana pôlitika matetika ahitana an’ireo Balita maro karazana amin’ny filalaovana pôlitika ho fitaovana ampiasaina ho an’ny fitiavan-tena sy fitsikombakombana eo amin’ny fikarohana tombotsoa manokana. Anjaran’ny vahoaka noho izany no mailo rehefa mifidy. Azy no miezaka manavaka ny tsara sy ny ratsy. Tsy ampy ny fitsarana ivelany amin’ny fisehon’ireo mpilatsaka eo amin’ny fahazotoany miditra am-piangonana sy ny fanefana adidy aterak’izany. Ny filazana ny marina mifanaraka amin’ny fanaovany ny rariny no ilaina ho fakafakaina voalohany. Misy moa ireo manam-pahaizana manokana amin’ny fanotorana ny ratsy natao sy ny tetika kasainy ao anatin’ny kabary tsara lahatra, toy ny firesahana fahamarinana sy fideradera-tena ho olona matahotra an’Andriamanitra nefa etsy ambadika tazana mitombo amin’ny antony tsy fantatra ny harem-be nangonina.
Impiry impiry moa izay no voafitakin’ny teny mamy am-bava ny vahoaka? Teraka sentosento toy inona maheno an’ny filazan’ingahindriana ny fahavakiny fo mahita ny fahantrana mianjady amin’ny mponina. Inona anefa ny vokatra rehefa tafakatra eo amin’ny fitondrana ireo nampiseho firaiketam-po amin’ny fahaizany mamendrofendro ? Izy no natavy sy nitombo vahana haingana. Ny vahoaka kosa dia nitombo fahasahiranana. Tazana izao fa maro ireo hifaninana amin’ny fifidianana an’izay ho filohan’ny Repoblika. Ny fividianana vato dia fividianana olona. Tsy maintsy misy anefa izany fanararaotana ny fahantrana mianjady. Ny tena tsy amidy hany fahaizana dia ny famitahana an’ireo mpividy mitady hamitaka amin’izany fanaovana tsena mikasika ny zavatra voarara tsy ifanaovana varotra.